Oziọma nke taa bụ 11 Nọvemba 2020 na okwu Pope Francis
Site n'akwụkwọ ozi St Paul onyeozi degaara Taịtọs
Nke kacha hụ n'anya, chetara [mmadụ niile] ka ha doo onwe ha n'okpuru ndị ọchịchị, ka ha rubere isi, ka ha dị njikere maka ezi ọrụ ọ bụla; ịghara ikwu okwu ọjọọ banyere onye ọ bụla, izere esemokwu, ịdị nwayọ, na-egosi ịdị nwayọ nile n’ebe mmadụ nile nọ.
Anyi onwe anyi kwa buru ndi nzuzu, ndi nupuru isi, ndi nwere obi ojoo, ndi ohu nke udiri obi uto na ihe uto nile, ndi bi n’ime ajo omume na ekworo, ndi na-asi asi na ndi n’aru ibe anyi asusu.
Ma mgbe ịdị mma nke Chineke, Onye Nzọpụta anyị, pụtara,
na ịhụnanya o nwere n'ebe ụmụ mmadụ nọ,
Ọ zọpụtara anyị,
ọ bụghị n'ihi ọrụ ezi omume ka anyị rụrụ,
kama site n'ebere ya,
jiri mmiri nke na-agbanwekwa ume ọhụrụ na Mmụọ Nsọ,
na Chineke awukwasiwo ayi ọtutu
site na Jisus Kraist, Onye-nzoputa-ayi,
ka ewe gua ya site n'amara-Ya,
anyi ghọrọ ndi nketa nke ndu ebighi-ebi.
Lk 17,11: 19-XNUMX
Mgbe Jizọs na-aga Jeruselem, o si na Sameria na Galili gafere.
Ka ọ na-abanye n'otu obodo nta, ndị ekpenta iri zutere ya, guzoro n'ebe dị anya ma tie mkpu n'olu dara ụda, sị: "Jizọs, onye nkuzi, meere anyị ebere!" Ozugbo ọ hụrụ ha, Jizọs sịrị ha, “Gaanụ gosi ndị nchụàjà onwe unu.” Mb ase ha nāga, eme-kwa-ra ka ha di ọcha.
Otu n’ime ha, mgbe ọ hụrụ na a gwọrọ ya, ọ laghachiri jiri oke olu na-enye Chineke otuto ma kpọọ isiala n’ihu Jizọs n’ụkwụ ya iji kelee ya. Ọ bụ onye Sameria.
Ma Jizọs kwuru, sị: “Ọ́ bụghị mmadụ iri ka e mere ka ha dị ọcha? Oleekwa ebe itoolu ndị ọzọ nọ? Achọghị onye ọ bụla laghachiri inye Chineke otuto, belụsọ onye bịara abịa a? ». Ọ si ya, Bilie, la; okwukwe gi azoputala gi! ».
Mara ka esi ekele, mara ka esi eto maka ihe Onyenwe anyị na-emere anyị, ọ dị mkpa! Mgbe ahụ anyị nwere ike ịjụ onwe anyị: anyị nwere ike ịsị i meela? Ugboro ole ka anyị na-asị na-ekele gị n’ezinaụlọ anyị, n ’obodo anyị, n’ Churchka? Ugboro ole ka anyị na-ekele ndị na-enyere anyị aka, ndị dị anyị nso, ndị na-eso anyị na ndụ? Anyị na-ejikarị ihe niile akpọrọ ihe! Nke a na-emekwa na Chukwu Ọ dị mfe ịgakwuru Onyenwe anyị ịrịọ maka ihe, mana ịlaghachi kelee ya… (Pope Francis, Homily for the Marian Jubilee of 9 October 2016)